I nwere ike iweta mgbanwe na nhọrọ gị. : Martin Vrijland
I nwere ike iweta mgbanwe na nhọrọ gị.
gbara akwụkwọ OZI OZI	by Martin Vrijland	na 10 June 2019	• 12 Comments
Mgbe mgbe, mgbe ị na-amalite mkparịta ụka na ndị na-amalite ịghọta na ụwa na mgbasa ozi na ndọrọ ndọrọ ọchịchị na-agwa anyị dabeere kpamkpam na aghụghọ na aghụghọ, mmeghachi omume ahụ bụ ihe na-enweghị olileanya nakwa na "ị pụghị ime ihe ọ bụla banyere ya ime ". Ana m achọta mgbe nile na nkwubi okwu dị mma. Gini mere i nweghi ike ime ihe obula banyere ya? Ọ bụ n'ihi na anyị bi na Netherlands na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nde mmadụ 18 nọ na obere akụkụ ụwa ma ọ bụ n'ihi na ọnụ ọgụgụ ụwa dị ihe ruru 8 ijeri?
Tinye ọnụ ọgụgụ nke ndị na-ekpebi onyinyo ahụ na Netherlands? Ndị a bụ ole na ole ndị na-eme ihe nkiri ndọrọ ndọrọ ọchịchị ndị na-egwu aka ekpe, nri, akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, na-acha odo odo, na mmegide na ndị njikwa ọgụgụ isi na mgbasa ozi (dịka ndị na-agụ akụkọ akụkọ, ndị editọ nke Telegraaf (na akwụkwọ akụkọ ndị ọzọ), Jeroen Pauw, Matthijs van Nieuwkerk na aha dum ndepụta nke ukwuu akwụ ụgwọ ọkachamara propagandists). Nke ahụ bụ obere osisi.
Ihe anyị na-eme bụ ihe m na-akpọ 'usoro' ahụ. Usoro a bụ ọrụ radar nke radar niile na-arụ ọrụ ọrụ elekere niile. Usoro iwu, iwu na ụtụ isi na ndị nlele niile nke iwu ndị ahụ, iwu na ụtụ isi. Mgbe ahụ, ị ​​nwere ụlọ akwụkwọ na ndị nkụzi na ihe niile ụmụ mmadụ na-amụta ịrụ ọrụ n'ime usoro ahụ.
Ihe kpatara na anyị enweghị ike (ma ọ bụ karịa: amaja) ka usoro a na ihe mere na anyị agaghị anwa anwa ịchụ nta pasent nke ndị ụgha ndị ọkachamara si n'ọnọdụ ha ma ọ bụ na ọ dịkarịa ala ka anyị mara na anyị na ha na-eme, bụ n'ihi na anyị hụ na enwere ọtụtụ njehie, mana n'otu oge ahụ dabere n'otu usoro ahụ. Ole mmadụ ole na-arụ ọrụ n'ụlọ nnukwu ụlọ mgbe ha na-etinye iwu, ịlele ndị ọzọ ma ọ bụ ịzụ ọgbọ ọzọ. Ndị ọzọ na-arụ ọrụ na 'enyemaka' ebe onye ọ bụla nke na-enweghị ike ịrụ ọrụ n'ime usoro a na-akụda ma ọ bụ na-emechi. Ọ bụrụ na onye ọ bụla n'ime usoro a na-eyi egwu ịkwụsị oge ahụ, a ga-eji radar ahụ dochie ya.
Anyị amaghị ihe ọ bụla mana "usoro"; anyị amaghị ụwa nke na - agbaba na usoro ihe dị ugbu a. Ebee ka anyị ga - enwe enweghị ihe onwunwe maka ụgbọ ala, ụgbọ oloko na ụgbọelu anyị? Ebee ka anyị ga - enwe enweghị iwu okporo ụzọ, ọkụ ọkụ ọkụ, iwu na iwu? Kedu ka ị ga - esi ahazi ụwa? Kpochapụ iwu ndị ahụ niile? Ànyị ga-achọ ụdị ọgba aghara? Ọ bụghị ọchịchị onye kwuo uche ya bụ naanị ihe nlereanya na-arụ ọrụ? Ka ị ga-achọ ibi ndụ n'okpuru ọchịchị aka ike?
Isi ya abụghị na ụkpụrụ ndị bụ isi dị njọ; ihe kpatara ya bụ na ndị na-agba ọsọ n'ụlọ ntu ahụ na-eme ka anyị na-ebi na ọchịchị onye kwuo uche ya, ebe ọ bụ na ọ bụghị ihe nzuzo ọ bụla na-achị ọchịchị ọchịchị aka ike. Nke a na-emetụta na ọkwa mba na mba. Tụkwasị na nke ahụ, ihe kpatara ya bụ na anyị na-ejupụta na ndọrọ ndọrọ ọchịchị na mgbasa ozi dị ka ihe iyi egwu site na mpụ na ụjọ (mgbe ọ bụla e kere onwe ya) na ụdị ihe ndị ọzọ nile, na-eme ka ọ dị ka ànyị chọrọ iwu, iwu na nchedo. Oké ifufe nke nọgide na-eri egwu egwu ma na-egwu ìgwè mmadụ na aghụghọ na aghụghọ, na-eji nwayọọ nwayọọ eme ka ụmụ mmadụ na-adịwanye ndụ na steeti uwe ojii. O di nwute, ọ na-arụ ọrụ nke ukwuu iji nweta sanwichi, nke mere na achicha na egwuregwu nwere ike ịnọgide na-akwụ ụgwọ, ya mere ihe ka n'ọnụ ọgụgụ na-anọchi anya ihe na-eme.
Onye na - akọwa ihe ọmụma bụ Plato dere otu akụkọ a kpọrọ "akụkọ banyere ọgba ahụ" (lee ịbịaru ya na isiokwu a). A na-ekekọta ndị nọ na ala ọgba. Ha amaghi ihe ọ bụla ma ọ bụ onyinyo nke ihe ndị na-agafe n'ìhè nke ìhè. Ka anyi kwuo na anyi bu ndi mmadu nile n'ime ọgba ahu nke ejikotara ha n'uwa. Plato na-ekwu n'akụkọ ya na ọ bụrụ na a ga-ebute ndị mmadụ n'elu, ìhè anyanwụ na-eme ka ha kpuo ìsì, ya mere nnwere onwe na ụdịdị nke ihe ahụ (nke ha na-agbanye n'ime mgbidi) mara ọgba), na ha ga-ahọrọ ịhọrọ ebe a maara chained n'ọgba ahụ na nnwere onwe nke ha nwere ohere iji detụ ire.
Ndị nọ n'ọgba ahụ agaghị amata ezi ikike ha dịka ụda nke agbụ ha. Ha agaghị enwekwa nnwere onwe n'ezie. N'ezie; ọtụtụ ga-ahọrọ ọnọdụ ndị e tinyere agbụ na onyinyo nke eziokwu n'ihi na a tụkwasịrị ya obi. Ọtụtụ ga - ahọrọ ìhè nke mgbasa ozi na ndọrọ ndọrọ ọchịchị banyere ìhè anyanwụ.
Ọ bụrụhaala na anyị kpebie ịbanye n'ọgba ma mee ka radar nke usoro ahụ na-agba ọsọ; ọ bụrụhaala na afọ ojuju nke eziokwu anyị nwere ike ịnweta (kama ịdọpụ onwe anyị pụọ n'aka ndị dọgidere anyị n'ime usoro nke iwu na iwu na-agbanye anyị agbụ na achịcha na egwu naanị na-etolite na mgbidi) anyị agaghị emeli Ọ bụrụhaala na anyị na-enyocha ibe anyị ma ọ bụrụ na anyị ka agbụ mkpọrọgwụ na usoro ahụ, ọ dịghị onye na-agba ya ume ka ọ mebie agbụ ndị ahụ, anyị ga-anọgide na ndò nke ike anyị ma hụ ụwa nke na-egosi na ihe dị adị na mgbidi.
Ọ bụ oge ịkwụsị radar; iji mebie agbụ ndị ahụ ma mee ka ndị na-atụ egwu ọgba aghara dị na ọnụ ụzọ ọwara ahụ. Ị chọrọ egwu ahụ ndị dike ('anyị nwere ike ịbụ naanị maka otu ụbọchị') site n'aka David Bowie. ọ bụ ihe i nwere ike ime taa ma ọ bụ ihe na-emetụta eziokwu gị. Ozugbo a kwụsịrị na agbụ, ị nwere ike ịkpọ ndị ọzọ n'elu ma nyere aka imeri egwu nke nnwere onwe n'ezie. Gbanyụọ agbụ ndị ahụ ma gwa mmadụ ibe gị banyere ịnọgide na-ejide usoro ohu n'ime ọgba. Ị nwere ike ịmalite taa; ọ bụ naanị egwu ị na-atụ ka ịhapụ nchebe ụgha nke ọmarịcha maara nke na-ejide gị azụ. Guzo ma mebie agbụ gị ma kwe ka onye ọ bụla nke na - anwa igbochi gị ma debe gị n'ọgba maara na okwu ndị doro anya na ị gaghị abụ ohu ohu ụgha maka ndụ gị ọzọ.
Tags: ihe atụ, bowie, ụbọchị, agba, n'ihi na, ọgba, ndị dike, dị nnọọ, nhọrọ, etiti, otu, Plato, ndọrọ ndọrọ ọchịchị, eziokwu, gbanwee
10 June 2019 na 09: 37
Cheedị na ihe anọ e kere eke sitere na fim a na-ebu aha ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị dịka Mark Rutte, ndị na-ahụ maka mgbasa ozi dịka John de Mol, Peter R. de Vries, Jeroen Pauw, Matthijs van Nieuwkerk, Eva Jinek na ọtụtụ ndị ọzọ. Naanị ị ga - etinye ihe ngosi na ya ma hụ ihe mere:
10 June 2019 na 09: 42
Ohu ohu dere, sị:
10 June 2019 na 11: 33
Nye m ezigbo isiokwu!
Usoro nke ugbu a dabere na "ike" na "ike" a nọgidere na-enwe site n'aka ndị niile so na ya.
Ntak emi "ike" ke uwetn̄kpọ ẹwụt?
"Ike" dị na usoro ahụ abụghị ike zuru oke, mana "ike" dabere na amaghị, egwu, nrigbu na mbibi. Ndị na-achịkwa usoro ahụ ma nwee "ike" n'elu ndị mmadụ bụ ndị nna ukwu n'ịmepụta amaghị ihe a, egwu, nrigbu na mbibi n'etiti ndị mmadụ. A muru umuaka n'enweghi ala ma kwesiri ike itinye aka na usoro a, nke a na-akpo na usoro a na-aru ndi mmadu nile; mmasị ọha mmadụ.
Enweghị izugbe ọ bụla! Ọ bụ agbụrụ ọjọọ na-agba agba, ebe ndị isi ojii, ndị isi, ndị na-akụ azụ na ndị na-ahụ maka ọgwụ ọjọọ na-agbasi mbọ ike ijide "ọnọdụ ndị kachasị elu". Netherlands bụ ọchịchị aka ike!
Ezigbo ma ọ bụ ikike zuru oke dabeere na ike ịmepụta, na-ekwenye na nkwekọrịta na akaụntụ. Ndị nwere ọgụgụ isi nwere ike ịmepụta ihe ndị mara mma, na-enweghị ihe ize ndụ na ndị ọzọ, osisi na ugbo nwere ike ịdị.
O di nwute na, dika usoro a si kwuo, ndi mmadu nwere "ndi nwere ezi uche" abughi ndi nwere amamihe! Ndị a yiri "ndị nwere ọgụgụ isi" enwewo ihe ịga nke ọma ma tinye ha n'usoro ihe omume ahụ ma kwupụta okwu nduhie na nkwenye. Ndị a anaghị emepụta ihe ọbụla, kama ha na-arụ ọrụ ha na usoro, ebe ọ na-enweghị ohere maka ọgụgụ isi n'ezie, nke nwere ike igosipụta onwe ya n'eziokwu e kere eke na ebe nhazi na nkwekọrịta jikọtara. Ihe atụ nke ndị dị otú ahụ na-enweghị isi bụ ndị isi na onye na-acha ọcha ọcha ... ndị na-enweghị ike ịnabata ezi ndị nwere ọgụgụ isi na mpaghara ha. Vidio nke The Incredibles (n'ime isiokwu) bụ ezigbo ihe atụ nke a. Onye ọ bụla na-achị ọchị na vidio a, ma ọ bụ naanị ole na ole na-anwale iji zie ozi zuru ezu ma lelee onwe ha na enyo ... ma ọ bụrụ na ha na-achịkwa ịhapụ ụwa nke ego ha.
Laghachi n'ọrụ ma echi ma mee ike gị niile iji hụ ọnọdụ gị. Onye maara, enwere ike inwe nkwalite! Echela banyere ihe ị na-eme n'ezie. E kwuwerị, ị pụghị ịgbanwe ụwa. Ndị na-enweghị ike ịga ọrụ arụpụtalarị nke ọma site na usoro ahụ. Ndị na-esonụ na-emetụta ndị a: emela ihe ọ bụla, n'ihi na ị pụghị inyere ya aka.
Ọ bụrụ na ị maghị ihe ị ga-eme, kesaa isiokwu nke weebụsaịtị a ma kwado ebe nrụọrụ weebụ a na ego ego.
10 June 2019 na 13: 19
Ezi isiokwu site na Martin na nzaghachi dị mma nke ohu ohu!
Maasland dere, sị:
10 June 2019 na 14: 27
I tinyere ọtụtụ oku dị otú ahụ. Ma ọ ka na-abaghị uru
N'agbanyegh i ot'u i si eche banyere "akw ukw o nd i ns o," nd i ah u ga-emezu "n'ezie".
Ọ bụrụ na anyị na-eme nix, mgbe ahụ usoro ahụ na-aga n'ihu. Ọ bụrụ na anyị na-atụle 100den (ma ọ bụ ma ọ bụ ka e kere ya dị ka onye na-achịkwa mmegide) atụmatụ na ndị mmadụ n'otu n'otu iji kọọ akụkọ ọjọọ ... .. mgbe ahụ, ọ na - eme ka usoro mmeghe ... ... nke ga - emecha nweta otu ihe ahụ: 100 % na-achịkwa ọha mmadụ nke "ọtụtụ ndị ka na-abaghị uru ga - eje ozi".
Ọbụna ị ga-ebiri ebe obibi n'ụlọ ntu na mmadụ ole na ole, mgbe ahụ ị na-etolite na njedebe gị, abụghị map dị mma, n'ihi na otu usoro ahụ ga-emetụta obere ndị dị otú a.
Ndi ekeme ndidi ke akpanikọ ke edem ikpehe nnyịn? Ọ ga - abụ na ndabere nke otu n'ime akwụkwọ ndị ahụ dị nsọ bụ "nanị" na - emezu, ma amụma ahụ e dere banyere ọgbọ ọzọ? Naanị ihe ị ga-amụ n'ihu bụ ajụjụ: ka ọ bụrụ n'ezie na ike Chineke dị n'ezie nke mere ndokwa nke oge a (nke a), nke ọma na ihe ọjọọ na-egosiputa ọnụ, na nke ahụ na-ahapụ ihe eon malite mgbake zuru oke? N'ọnọdụ ahụ, anyị na-ebi oge na-adọrọ mmasị ma na-amụ ihe.
Ma, enwere m mmasị ịgụ otu ma ọ bụ 6 ndụmọdụ dị irè dị na gị banyere otu esi etinye oku gị n'ọrụ, ma nwee mmasị ịgụta nsonaazụ gị ịchọrọ anya gaa ụwa ka mma.
10 June 2019 na 15: 41
Echere m na ị ga-ekwupụta na ọ bụ ebumnuche na amụma amụma ga-emezu. Ekwesiri ighota na amuma nke okpukpere chi di iche iche gosiputara ihe di iche na iche di iche iche, ka ha we me ka agha di nkpa agha di nkpa n'etiti ndi di iche iche.
Enwetara m ọtụtụ isiokwu na m kwenyere na anyị na-ebi ndụ dị ka ihe atụ. Ihe omuma ihe nke bu "chi" nke di nkpa (nke bu onye mejuputa ihe omuma), nke bu na ekpere ya n'olu nzuzo na ndi Katolik: Lucifer
Agwara m ya na ihe kacha mkpa bụ ịmegharị ahụ bụ na a ghaghị ịhọrọ oke nhọrọ. Ma ọ bụghị ya, ịmegharị ahụ ga-abụ deterministic ma ihe ga-esi na ya pụta ga-abụrịrị nke doro anya, n'ihi ya, ọ gaghị abụ nkogharị, kama ọ bụ ihe nkiri na-adịghị mma.
Otú ọ dị, ka o wee nwee ike imetụta ihe ga - esi na ya ma duzie edemede ahụ (nke amụma ndị ahụ), onye na - ewu ụlọ etinyela 'ndị na - abụghị ndị na - egwu egwu' n'emegharị ahụ; ndị ọhụụ na-achịkwa ya bụ ndị ga-ezipụ mkpụrụ edemede egwu (mkpụrụ obi ndị na-ekere òkè na ngwegharị ọkpụkpọ ọtụtụ) na ntụziaka nke nnukwu edemede.
Ee, enwere 'chi' (onye na-ewu ihe) nke nkoghari a (ngbaghari otutu otutu). Ee, enwere akwukwọ nke a nwere ike ịchọta n'amụma na ee, e nwere otu (avatars) nke na-agba mbọ ịghọta nke a.
Ya mere, m ga-achọ ịnye gị 6 ndụmọdụ bara uru ị na-ajụ:
1. Kwụsị ikwere na eluigwe na hel (abụọ) na ikwere na ihe niile nnukwu okpukpe na-agwa gị, n'ihi na Chineke / Setan ma ọ bụ eluigwe / hell bụ ihe abụọ e kere eke dị ka akụkụ nke nmegharị iji tinye gị n'aka aka zipu ndi nche akwukwo ma nyefee nkpuru obi gi nye chi (onye na-eme ntughari); ma ọ bụ "nwa nke chi" (onye na-eme nkedo na uwe atụrụ).
2. Ghichaa onwe gi na ihe omuma a ma mechie onwe gi na uzo ndi mmadu na-adighi egwu egwu bu ihe ndi anyi na-akpo ndi mmadu, ma nke putara na 'onye na-eme ihe na-eme ihe'.
3. Chọpụta otú ndị amatars ndị a na-adịghị egwu na-eji amụma nke okpukpe nile mezuo nnukwu edemede ma dọọ mkpụrụ obi (ndị na-ekere òkè na-arụ ọrụ na ngwakọ ngwongwo ọtụtụ) ịkwado Luciferian AI ("ndụ ebighi ebi") n'ụzọ doro anya. nke okpukpere chi, "ihe di iche iche" nke transhumanism; ibu otu na otu).
4. Nabatara avatars ndị na-abụghị ndị na-egwu egwu, ma karịa nke ahụ, na-ezipụ ndị ahụ na mgbasa ozi na ndọrọ ndọrọ ọchịchị bụ ndị ji ọchịchọ obi na obi ha mee onwe ha ka ha nwee ike ịnweta avatars na-ede akwụkwọ; anyị na-ekwu okwu banyere aha a maara nke ọma na ndọrọ ndọrọ ọchịchị na akụkọ nta (ma ndị isi na ndị na-achịkwa ndị nnupụisi nke na-eri nri egwuregwu abụọ).
5. Kwụsị itinye onwe gị n'ụzọ ọ bụla na ọrụ nke edemede ahụ ma na-akpọ ntụrụndụ dịka iwu ha si dị: pụọ n'ọgba gị ma mee ka ị kwụsị ịtụ egwu na ọ bụrụ na ejighị ohu gị na enweghị ọrụ nke radar ọ ga-aga.
6. Debe ụdị okpukpe ọ bụla na nkwenye na "ebe a Jisos" (ma ọ bụ ike ọ bụla nke "na-abịa ịzọpụta gị") ma chọpụta na ị nọ n'ọkwá nke mkpebi gị. Ọ bụrụ na ị hụ na iwu nke nnwere onwe ime nhọrọ ga-eme mgbe niile, mgbe ahụ, ị ​​ga-ahụkwa na nhọrọ ọ bụla ị na - eme (nke na - esi na ntụziaka nke ederede chọrọ) na - enyere aka imetụta nsonaazụ ikpeazụ ma nyere aka Luciferian njedebe na njedebe.
Maka nkọwa zuru ezu nke ihe m na-ekwu n'elu, gụọ isiokwu a: https://www.martinvrijland.nl/nieuws-analyses/het-is-kinderlijk-eenvoudig-om-de-toekomst-te-voorspellen-als-je-het-script-doorziet-wordt-een-nostradamus/
Ma ọ bụ gụọ isiokwu ndị dị n'okpuru nchịkọta n'okpuru isiokwu bụ 'nkedo' ma malite na peeji nke 2 wee gaa n'ihu na-agụ ruo mgbe ikpeazụ.
11 June 2019 na 21: 53
Nnyocha dị ezigbo mma na nchịkọta ihe kachasị mkpa nke isiokwu gị niile nke ị dere na afọ ndị a. Na nyocha nke m, m na-abịa n'otu nkwubi okwu ahụ. Ọ bụ ihe mgbaru ọsọ magburu onwe ya ma 'n'oge ndụ anyị' na edemede ahụ agaghị agbanwe (zuru oke) (ndụ dị mkpụmkpụ maka nke ahụ). O nwere ike ịbụ na a kụrụ osisi ahụ ma eleghị anya ha ga-apụta n'ime afọ ole na ole ma eleghi anya otu ihe ga-eme. Ma eleghị anya, n'ihi na ụgbọ oloko ahụ na-agagharị na ya mere mkpụrụ nwere ike ọ gaghị apụta ma ọlị. 'The Non Player Characters' nwere ikekwe ihe dị mma ebe a n'ihi na ehichapụghị ncheta ha?
Ka ọ dị ugbu a, echere m na ị kwesịrị ịkwado 'Mmụọ' gị. Maka (nakwa dị ka nchọpụta m si dị) ọnwụ abụghị 'egwuregwu n'elu'. Ọbụna mgbe ị nwụrụ, a ga-anwale nnwere onwe ime nhọrọ gị ma ha ga-anwa ime ka ị họrọ. Dị nnọọ ka 'egwuregwu' ahụ. Ọ bụrụ na ị kwe ka ị rafuo ma mee nhọrọ na-ezighi ezi, a ga-ehichapụ 'ncheta gị' na ị ga-etinyeghachi n'ime 'anụ ahụ'.
Na mbu ayi abugh 'anu aru'. A na-ahazi anyị ka anyị banye n'ime nkogharị a, mgbe ahụ, anyị ọzọ (na mpaghara nile) ahaziri na nmegharị ahụ. Ọ bụrụ na 'nnwere onwe ime nhọrọ' bụ iwu zuru ụwa ọnụ, mgbe ahụ, anyị onwe anyị enyewo ikikere iji kpọọ 'egwuregwu' (ọ bụ ezie na ọ bụ n'okpuru mmejọ ụgha). Ihe mere anyi ji kwenye igwu egwuregwu a bu ihe ndi ozo.
Ya mere, ugbu a, ọ bụ ọnyà anyị (n'otu n'otu) mgbe ọnwụ nwụsịrị ghara ime nhọrọ na-ezighi ezi n'okpuru aha 'nnwere onwe ime nhọrọ'. N'ihi na ọ bụrụ na i jiri 'nnwere onwe ime nhọrọ' họrọ (site na ime ka a kwenye n'okpuru mmejọ ụgha), mgbe ahụ, nke a bụkwa 'nnwere onwe nnwere onwe', nke ezi obi ma ọ bụ nke e guzobere, ọ dịghị mkpa. Nke ahụ bụ kpọmkwem otú e si ahazi 'nnwere onwe ime nhọrọ' gị.
Ọ bụ mgbe ahụ ka oge (ọ bụrụ na ọ gaghị etinye aka na edemede ahụ na nkedo (dị ka o kwere mee)) ilekwasị anya na ịghara ịdị na-emegharị ahụ mgbe ị nwụsịrị? 'Egwuregwu' -> 'Player Up, One More Game'.
Ọ bụrụ na ịnweghị ike imeri 'egwuregwu', ọ ka mma ịmụta otú ị ga-esi kwụsị ịkpọ ya? Karịsịa ma ọ bụrụ na ihe mgbaru ọsọ bụ ịnọgide na-abụ gị na egwuregwu (Singularity / Transhumanism) na ha na-agbalị ka ị ghara ịhọrọ ịhapụ 'egwuregwu' ahụ?
Ọ ga-amasị m ịmara ọhụụ gị na nke a ..
12 June 2019 na 00: 56
Echere m na ọ bụ nchịkọta kachasị mma mgbe niile!
Ya mere ana m ekwenye na 100%.
Rebel dere, sị:
10 June 2019 na 15: 54
Ị naghị emetụ aka na isi ihe dị mkpa na njiriri na akụkọ banyere ọgba ahụ. Ndị na-ahụ ụdị ọdịdị dị iche iche ma na-ama ìhè anyanwụ na-aghọtaghị "ndị ejidere" mgbe ha laghachiri n'ọgba ahụ. Ha na-akawanye njọ n'ọgba ahụ n'ihi na ejighizi ha eme ihe na ụwa ndị a na-eme ka ọ bụrụ ihe na-adịghị mma site na "chained".
10 June 2019 na 16: 08
Unu alaghachi n'ime ọgba ahụ ..
S0M30N3 dere, sị:
12 June 2019 na 04: 37
Otu okwu abataghị .. site na nke a naanị njikọ njikọ youtube: https://m.youtube.com/watch?v=_sB5cTocfZM
Daalụ maka ihe niile martin, edemede, mkpali, ihe doro anya, adala mbà ma nọgide na-aga.
Ekele S0M30N3 - Jeffo
12 June 2019 na 18: 27
Ọ bụrụ na anyị chọrọ ịgbanwe ọnọdụ ahụ, na ebe a na ugbu a, mgbe ahụ, anyị ga-achọpụta na ọ bụ ụmụ nwoke nke edemede ahụ na-eme iwu, na-eduzi iwu ma ọ bụ site na psyops, wdg. Nke na-emerụ mmadụ nkịtị. Ụmụ okoro a ejiriwo aha nne nna Dutch nweta ọtụtụ narị afọ ma mee ka ha bụrụ ndị Netherlands na ndụ kwa ụbọchị, nke mere na onye Dutch na-eche na ha bụ 'Dutch'. Ha abụghị na ọ na - emetụta onye 'ọkwá' bụ onye na - ejide ọnọdụ dị elu na Netherlands na onye na - achọghị ịkwụsị / anaghị esonyere onwe ya. Ọ bụrụ na anyị chọrọ ịgbanwe ọnọdụ ahụ, anyị ga-ekwenye na ndị iro a nke si mba ọzọ na-ahapụ isi ọrụ ha ma wepụ Netherlands n'onwe ya. n'ihi na nke ahụ bụ isi iyi nsogbu ahụ na Netherlands. Ọ bụrụ na anyị enwee ihe ịga nke ọma ịhapụ ha na Netherlands, anyị ga-agbanwe ọnọdụ dị na Netherlands na ụzọ dị mma, ọ bụghị nchịkwa aghụghọ, ọchịchị aka ike, ntuli aka na-adịbeghị anya, ozi ọma, na ihe ndị ọzọ banyere ndị nkịtị, nke bụ naanị maka ọdịmma ha.
" E jidere Peter M. (site na nwanna ahụ na-ekwenye n'aka Jeroen Pauw)
Mgbapu nke ịchịkwa 'rechts', Trump, na Brexit (na ihe niile ejikọrọ ya) amalitela »
Nleta nile: 15.870.681
Wilfred Bakker op Libya gosipụtara mba mba Europe ga-abụ nke mbụ Turkey ga-ebu
JHONNYNIJHOFF@GMAIL.COM op Libya gosipụtara mba mba Europe ga-abụ nke mbụ Turkey ga-ebu
Wilfred Bakker op Nwoke nwoke nke transgender na-amu nwa nke onye n’enweghi nmekorita nwoke na nwanyi inye onyinye nwanyi